Omnye-stock exchanges kwi-USA: i-Intanethi Dating ukusuka Emelika
Njenge ke ezininzi ezahluka-hlukileyo kunye kwi-Intanethi-kubhekiswa waba kunjalo invented i-Intanethi Dating kwi-USA kwaye presentable. I-intanethi Dating akazange invented e-United States, kodwa kanjalo njengokuba kuqala”socially owamkelekileyo”kwaye isiganeko kuba masses. ‘Inkwenkwezi’ putting ishishini billions ka-dollazi ngonyaka – malunga ne-x kangangoko kwi-Germany, ngoko ke x abaninzi Icacile (Kuma). I-United States sino hayi watyelela kanti kulo mntu, ukwenza kuthi umfanekiso kwaye thetha isitshixo amanani, kodwa encinane ‘Wangaphambili Ekude-Reportage’ kunjalo. California: ethile Gary Kremen tshata ethembisa Domains ezifana ‘ngesondo’, ‘Imisebenzi’ kwaye ‘Dibanisa’. Thelekisa bobs phezulu kwaye phantsi kuqala, ngoko ke, phambi kokuba ibhinqa msebenzi kufuneka umcimbi kuzo Isandla sakho, kwaye endaweni Porn umfazi inikezela eyobuhlobo yokufuna Ukwazi nge-Intanethi – lokuqala kwi-Intanethi Dating site wazalelwa waza waya kuhlala kwi-epreli. Kwiminyaka kamva, Thelekisa kukuthi ngomhla kakhulu ngaphezulu kwimakethi bafika kwi ihlabathi: Yezigidi amalungu ukusuka ezahlukeneyo amazwe. thelekisa-pair ngamnye ngonyaka abasebenzi. A lohlobo impumelelo ibali ‘Zenziwe kwi-USA’, kwaye ufumana nje omnye ezininzi kwi-Intanethi Dating Ishishini. Ucinga, kunye phantse yezigidi ukufumana-uphendlo ihlabathi ke inani-zifunyanwa erotic-Intanethi Dating. Zethu ebizwa-oninika a ekunene unye kwi yintoni enye stock kwimakethi uphuhliso amazwe eli hlabathi. Thina tan ikhamera ukusuka yehlabathi kwi-USA: yezigidi abemi ezingama-Internet abasebenzisi izigidi Icacile, qho ngenyanga kwi-personals portals, Thelekisa, Yahoo.
Yongezelela ukuba, abasebenzisi kwi-Intanethi-iqabane lakho intermediaries ezifana KUTHI DATING kwaye yonke into kwi-kolawulo Ngesondo. Ngoko ke NATHI ayiyi kuphela kwi-Intanethi-Dating-ihlabathi ke, kumazwe angaphandle champion, kodwa kanjalo? ngokucacileyo oyena yesizwe-Intanethi Dating kwimakethi ehlabathini. Senza kancinci uphando kwi-yenza kuba oku impumelelo ibali: nabani na ufuna ukuba bathathe inxaxheba igolide rush, kufuneka ixesha Shovel nezinye ukwenza unikezelo kwi-Intanethi Dating kwaba kanye kanye kwi-USA: I-Internet ngokwayo ngu ngaphezulu okanye ngaphantsi i-i-american lwesikhumbuzo – iselwa ngaphandle kwi-PC (IBM) kwaye ezisisiseko Software (u-Microsoft). Akukho nimangaliswe ukuba kwi-emva xesha, okokuqala, i-american iinkampani sebenzisa i-Internet populated. Omnye ufuna kuphela cinga Netscape, Ebay, kwaye Amazon – kukho, kunjalo, bred plenty ka-wangaphambili specialists, ngubani onako ke invent endleleni, i-Intanethi Dating kwaye Mature. ingakumbi ukusukela ezininzi waqalisa boar ngakumbi abantu behlabathi – ngokunxulumene Motto: ‘Ukuba ndenze nakuba kunjalo, i-intanethi wam iimboniselo, ngoko kutheni na kanjalo ubomi iqabane lakho’. I-Intanethi Dating kwi-USA kuba h. iminyaka sele isebenza kuba yakhe kwi-Germany, ngoko ke okulungileyo, kodwa kanjalo kakhulu considerably ukuba yokuba ‘Dating’ e-United States ngokupheleleyo ezahlukeneyo indawo kunokuba ‘Endala Yurophu’. Kwi-lokukhula iinkampani amava, ngokunxulumene kakhulu elaborate kwaye elinovakalelo iindlela apho kuya kuza, ukuze Iqabane lakho ngokwahlukileyo kwi-immigration lizwe, e-USA, apho umxholo kakhulu kakhulu a pragmatic kuhlangatyezwana: ‘Dating’ iselwa lula nge kukhulula acquaintance, kwaye ujonge into eyenzekileyo. ‘Sino fixes kuba oku uhlobo harmless Intlanganiso precise elithi wethu kubalulekile kwi-USA, hayi enkulu kokuba sele ukuba ukutsiba, yokuqala uqhagamshelane kuba ‘Dating’ kwaye ‘kwi-Intanethi’. Kwi-Germany, nangona kunjalo, Dating kokuba abe bafunda kuphela kunye ubunzima.
Kuba nge-Intanethi Dating
Kwaye kuphela ukususela a ezimbalwa kwiminyaka eyadlulayo, ngoku socially owamkelekileyo, kunye ‘umntu ke data’. Kwi-USA kukho othile omnye exchanges njengoko kwi-Germany, ibe kuya kuba Blacks, Amayuda, abaphathi, ingqinqwa, beautiful, pilot, okanye ivy League graduates. Singathi kuba uluhlu yiya kwi kwaye njalo. Kwaye ezi specialty-Dating zephondo ingaba experiencing a enkulu influx.
Eyona isizathu oku kukuba abantu
ye clarification kwi-U.S. ufumana okuninzi ngakumbi heterogeneous kunokuba Aseyurophu. Nje ukuba ye Latinos kwi-S, inzala ka – ngamakhoboka kuyo yonke indawo, Protestant Irishname, abaninzi i-american Namayuda. Kanjalo oku sele into omawuyenze nge-tradition ka-Immigration. Ngoko ke, njengoko U.S.-Intanethi Dating kwimakethi njengoko lokuqala ‘phezulu’ wafika (umz, ngokunxulumene umthengi. Abemi), kanjalo lokuqala ehlabathini ukuba sele ukuba weaken significantly iqalile: Kwi-iminyaka significantly ngaphantsi Icacile baba, okokuqala kwi ezindleleni kunokuba. Kwi ezimbalwa eminyaka, i-India ingaba mhlawumbi nani likhulu yesizwe-Intanethi Dating kwimakethi ehlabathini, okanye mhlawumbi-China. Henning Wiechers aqwalasela ukususela oko ihlabathi ka-kanye stock exchanges kwaye ithathwe kwi-media njengoko ephambili ingcali kwi-isihloko. I-olugqibeleleyo isikhokelo kuba bonke abo ufuna ukujonga jikelele kwamanye amazwe ukuya Umlingane okanye iqabane lakho. Le Vidiyo ibonisa ukuba ngaba ihlabathi ke funniest kwaye saddest stories ukuba sele kwaziswa malunga ukukhangela a iqabane lakho kwi-Intanethi
← I-Dating site photo